Ihowuliseyili Pop Up Instant Commercial Canopy kunye Sidewalls Intente kunye Greenhouse | Uloyiso
Amacandelo angama-40-99 Amacandelo ali-100-199 > = 200 Amacwecwe
$ 35.00 $ 32.00 $ 29.00
Le ntente yokusonga ilungele iminyhadala yangaphandle yosapho, ulwandle, iqela losapho, inkampu kunye nokusetyenziswa kwezorhwebo Ungayifaka nakwiyadi yakho njengelanga elikhulu nelithandekayo lokonwabisa usapho kunye neendwendwe zakho.
1) Isakhelo sesinyithi esidityaniswe nomgubo omnyama, umhlwa kunye nokumelana.
2) Umgangatho ophezulu we-oxford yelaphu ene-PVC yokugquma kunye ne-100% yokungena manzi kunye ne-UV yokukhusela
3) Kulula ukuseta ngabantu aba-2 abalandela incwadana yokufaka
4) ukugcinwa okulula kunye nezothutho.
i-legprofile-30x30 / 25x25mm, ityhubhu ye-truss-12x25mm, ityhubhu-0.8mm
Uyilo lwekholamu lunamacandelo ama-4 okuphakama okulungisekayo ukuhlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla; Ilungele imisebenzi yangaphandle enje ngemiboniso yangaphandle, ukusetyenziswa kwezorhwebo, amaqela, imitshato, inkampu, iipikniki, njl.
Ifanelekile kwimidlalo yangaphandle, umsitho, umnyhadala, intengiso yentakumba, ipati, ulwandle, indawo yokudlala njalo njalo.
Isakhelo esenziwe ngesinyithi esomeleleyo sesinyithi esingqina umhlwa, ukumelana nokubola kunye nokuhlala ixesha elide. Isakhelo esiphambili sesakhiwo esinqamlezileyo songeza uzinzo.
Umlenze ngamnye onamaqhosha asezantsi okhupha ngokukhawuleza, kulula kakhulu ukusonga kunye nokuhlengahlengisa ukuphakama (ukuphakama oku-4 kuyafumaneka), akukho kuncipha kweminwe.
Iimbambo zokuxhasa umoya kunye neepali zombindi ziyongezwa ukwenza isakhelo sentsimbi ukusuka kuxhathiso lomoya.
Isimbozo sephahla senziwe ngelaphu le-oxford elingu-600D eline-PVC kunye ne-100% engenamanzi kunye ne-UV yokukhusela.
Egqithileyo Imodeli esisiseko yokusonga intente ye-gazebo ngobukhulu obahlukeneyo obukhoyo
Okulandelayo: Ukuhamba kwegadi yePlastikhi yezoLimo 6 x 3 Meter
Quality High Commercial intente usonge 10'x ...